Qiimaha Ogaysiiska Ka Dhaafida Mas'uuliyadda, Iibinta - iibso Shirkadaha Ogeysiiska Ka Dhaafida Mas'uuliyadda ee ku taal medicrawmaterials.com
Si si fiican loogu adeego dhagaystayaasha ballaaran (oo ay ku jiraan macaamiisha iyo saaxiibbada warshadaha dawooyinka), degelkeenu wuxuu ka dhigayaa diidmada soo socota macluumaadka (oo ay ku jiraan qoraalka, sawirada, xiriiriyeyaasha) la sii daayay:
Macluumaadka la daabacay ee ku saabsan waxtarka, isticmaalka iyo isticmaalka alaabooyinka ma aysan xaqiijin degelkan. Haddii dhagaystayaashu rabaan inay ogaadaan xaaladda saxda ah, fadlan la tasho soo saaraha, qaybiyaha, daabacaha macluumaadka asalka ah ama xirfadlaha daryeelka caafimaadka ee alaabta.
Sawirada la daabacay ma uusan xaqiijin degelkan waxaana loogu talagay oo kaliya. Haddii dhagaystayaashu rabaan inay ogaadaan xaaladda dhabta ah ee sheyga lagu muujiyay sawirka, fadlan la tasho soo saaraha, qeybiyaha ama daabacaha macluumaadka asalka ah ee sheyga.
Macluumaadka sicirka la daabacay ee ku saabsan sheyga lama xaqiijin degelkan waxaana loogu talagay oo kaliya. Qiimaha gaarka ah ee badeecadaha waxay ku xiran yihiin sicirka dhabta ah ee wareegaya.
Haddii dhagaystayaashu ay rabaan inay isticmaalaan sheyga ka dib markay baaraan macluumaadka badeecadaha qaar degelkan, fadlan la tasho xirfadle daryeel caafimaad, soo saaraha iyo qaybiyaha badeecada ka hor intaadan isticmaalin. Websaydhadeenu mas'uul kama aha wixii cawaaqib ah ee adeegsiga sheygan.
Macluumaadka daryeelka caafimaadka iyo fayoqabka ee la daabacay ma uusan xaqiijin degelkan waana tixraac kaliya. Haddii dhagaystayaashu rabaan inay tixraacaan macluumaadka qaarkood ee daryeelka caafimaadka iyo ladnaanta, fadlan la tasho xirfadle daryeel caafimaad ka hor. Websaydhadeenu mas'uul kama aha cawaaqibka ka dhasha dhagaystayaasha tixraaca macluumaadkaan loogu talagalay daryeelka caafimaadka, daryeelka caafimaadka ama ujeeddooyin kale.
Tiirarka xirfadlayaasha ah sida dhiirrigelinta maalgashiga dawooyinka, soosaarka iyo baahida, mashaariicda farsamada, iyo encyclopedias wax soosaarka ayaa loogu talagalay oo keliya daalacashada iyo adeegsiga xirfadlayaal ku hawlan dhiirrigelinta maalgashiga dawooyinka, wakaaladda, wax soo saarka, ama ganacsiga.
Haddii dhagaystayaashu ogaadaan in macluumaadku khaldan yahay, waxay soo jeedin karaan wax ka beddel ama tirtir boggan. Websaydhku si dhakhso leh ayuu wax uga beddelayaa ama u tirtirayaa macluumaadka khaldan. Macluumaadka dib loo eegay wali lama xaqiijin sidaas darteed sidoo kale waa tixraac kaliya.
Macluumaadka ku saabsan dhiirrigelinta maalgashiga, wakaaladda, saadka iyo baahida, qorista iyo dalabka la daabacay ma xaqiijinayaan degelkan waana tixraac keliya. Dhageystayaasha xiiseynaya macluumaadka waxay si toos ah ula xiriiri karaan daabacaha macluumaadka.
Diidmadaas waxaa sharraxay websaydhka. Marka laga hadlayo arrimaha kale ee aan la dhammaystirin, fadlan tixraac bayaanka sharciga ah ee bogga.